Sharciga deganaansho ee loogu talogalay waxbarashada heerka dugsiga sare | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / Sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah / Sharciga deganaansho ee loogu talogalay waxbarashada heerka dugsiga sare
Haddii aad wax barato dhinaca heerka dugsiga sare oo aad tahay inta u dhaxaysa 17 iyo 24 sano waxaad xaaladaha qaarkood fursad u haysataa inaad hesho sharci deganaansho oo xadidan oo wakhti dheer ah si aad u dhamaysato waxbarashadaada.
Tani waxay khuseysaa adigaaga dhigta dugsiga sare, dugsiga sare ee ardayda laxaadkoodu kala dhantaalanyahay ama waxbarasho u dhiganta sida tusaale ahaan dugsiga dadka waaweyn ama waxbarashada dadka waaweyn ee degmada (Komvux).
Dhererka sharciga deganaansho waxay ku xirantahay haddii aad wax ku barato barnaamij qaran ama barnaamijka soo gelida iyo inta ay leegyahay wakhtiga kaaga harsan waxbarashadan.
Maxaa shuruud u ah in aad hesho sharciga deganaansho ee waxbarashada ee heerka dugsiga sare?
Waa arrimo badan waxa raadka ku yeelanaya haddii aad heli karto sharciga deganaansho ee loogu talogalay waxbarashada dugsiga sare.
Way kala duwanyihiin qawaaniinta loogu talogalay adigaaga magan-gelyo doonka ah iyo adigaaga haysta sharci deganaansho oo ku meel gaar ah oo aad doonaysid inaad dheerayso. Qawaaniintan xitaa way kala duwanyihiin iyadoo ku xiran haddii aad buuxisay 18 sanno oo timi Iswiidhan iyadoo ay kula socdeen ama aanay kula socon waalidkaagu. Nooca barnaamijka aad wax ka barato iyo goorta aad magan-gelyo ka codsatay Iswiidhan xitaa raad ayay ku yeelan karaan qiimeyntan.
Akhri dheeraad ku saabsan sharciga deganaansho ee dhinaca waxbarashada heerka dugsiga sare oo ku qoran bogga Hey'ada Socdaalka. Warbixintan waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi oo keliya.
Si loo helo sharciga deganaansho ee loogu talogalay waxbarashada dugsiga sare waa inaad si joogto ah u caddaysaa inaad si fir-fircoon uga qayb qaadatay waxbarashadaada. Hey'adda Socdaalka ayaa kula xiriiraysa marka la gaaro wakhtigi aad arintan soo caddaynayso.
Maxaa dhacaya marka aad dhamayso dugsiga sare?
Marka aad dhamaysato waxbarashadaada heerka dugsiga sare waxaad codsan kartaa in laguu dheereeyo sharci deganaansho ilaa iyo lix bilood si aad u hesho shaqo. Haddii wakhtigaas aad ku hesho shaqo aad isku masruufi karto waxaad codsan kartaa sharci deganaansho oo joogto ah.
Akhri dheeraad ku saabsan sida aad u codsaynayso dheeraynta sharciga deganaansho iyo waxa shuruud u ah si loo codsado sharciga deganaansho ee joogtada ah kuna qoran bogga Hey'adda Socdaalka.